Dissertation akademika amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny disertation Academic tsara indrindra amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Fomba fizahana dissertation akademika - Inona no atao hoe dissertation Doctorat?
Ny fiarovana ny doka no fotoana andrasana indrindra amin'ny asan'ny mpianatra. Eo am-panomanana ny dissertens-ny, ny mpianatra dia mila maka antoka fa efa nahazo ny fahalalana sy ny fahaizana ilaina amin'ny fanoratana sy ny fanangonana ny sanganasan'ny tompony. Satria ity dia heverina ho toy ny tetikasany capstone, ny mpianatra dia tsy afaka ho tsy ampy fahalalana, fahaiza-manao ary fahaiza-manao ilaina amin'ny famolavolana ny thesis azy manokana. Zava-dehibe noho izany ny ahazoany ny loharanom-pahalalana ilaina mba hanomanana ny tenany sy vokatr'izany, hahazo serivisy hanampy azy hanambatra ny diertiben'ny mari-pahaizana maoderany.
Ny iray amin'ireo serivisy marobe azo atao mba hanampiana ny mpianatra hanangana ny diany manokana dia fantatra amin'ny alàlan'ny lahatahiry thesis ho an'ny Master. Ity dia angon-drakitra iray ahafahan'ny mpianatra mikaroka sy manangona ny fitaovana ilaina rehetra ilaina amin'ny fanangonana ny diariny manokana. Ny fitaovana omena amin'ity serivisy ity dia feno sy feno. Izy ireo dia misy loharanom-baovao momba ny fikarohana, andinin-tsoratra ary drafitra ny taratasy lehibe, santionany famoahana ary dissertations ataon'ny siansa izay nifanaovan'ilay mpianatra taratasy.
Azon'ny mpianatra atao koa ny manararaotra ny tahiry momba ny bakalorea. Ny data dia afaka manaporofo fa tena ilaina indrindra ho an'ireo manana mari-pahaizana ambony. Ahitana lisitra feno an'ireo diary izay nanolotra lahatsoratra azo ekena amin'ny mari-pahaizana doctorat. Ireo manana mari-pahaizana bakalorea dia afaka miantehitra amin'ny angon-drakitra mba hahalalanao raha misy sanganasa navoaka izay mifanaraka amin'ny lohahevitry ny mari-pahaizana bakalorea tsirairay. Ny ankamaroan'ireny tahiry ireny dia mitanisa ireo andrim-panjakana nahazoan'ny mari-pahaizana bakalorea ihany koa.
Ny tompon'ny mari-pahaizana licence izay hanoratra ny dissertation akademika ho azy dia tsy tokony hanadino mihitsy ny fahafahan'ny mindrana na mahazo fanampiana avy amin'ny departemantan'ny tantaran'ny oniversite na avy amin'ny departemanta hafa mitovy amin'izany. Matetika ny departemantan'ny tantara dia manana manam-pahaizana amin'ny sehatry ny fandalinana taloha, indrindra amin'ny tantara Indo-Eropa ohatra. Toerana iray tsara ahazoana fanampiana vitsivitsy dia ny tranombokin'ny oniversite. Afaka manatona ny mpitahiry ny boky fitahirizan-dry zareo foana ny olona alohan'ny hanoratany ny thesis-ny azy.
Manome fotoana maro ho an'ireo izay manohy ny mari-pahaizana doctorat ny Internet. Ny tranokala sasany dia manome ny tombony amin'ny thesis. Raha ny marina, misy fikambanana sasany manolotra programa mari-pahaizana doctorat amin'ny Internet. Ireo fandaharana an-tserasera ireo dia mahasoa manokana an'ireo efa matihanina nefa liana amin'ny fikatsahana diplaoma avo kokoa toa ny dokotera. Ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana Doctorat matetika dia mitaky fotoana, ezaka ary loharano bebe kokoa noho ny fandaharam-pianarana diplaoma mahazatra.
Ho an'ireo mpianatra izay tsy mifandray amina andrim-pianarana ary mikasa ny hanoratra ny dissertation-ny, dia afaka manohy ny famitana izany hatrany izy ireo amin'ny alàlan'ny fanaraha-mason'ny mpikambana ao amin'ny mpampianatra, indrindra fa izay manana mari-pahaizana akademika. Ny iray tamin'ireo mpianatro taloha, ohatra, dia afaka nahavita ny mari-pahaizana doctorat noho ny fitarihan'ny mpanolotsaina azy. Ny mpanolotsaina azy dia nanome torolàlana sy tolo-kevitra marobe momba ny lafiny samihafa amin'ny dissertation akademika. Izy koa dia afaka nisafidy komity mety hanara-maso ny tetikasa, handray ny fanampiana ilaina ary hividy ny fitaovana ilaina sy ny fitaovana ilaina. Ny profesora aza dia nanome azy sosokevitra sy hevitra ilaina momba ny lohahevitra sasany izay mbola tsy nodinihiny teo aloha.
Misy karazan-doka marim-pahaizana doctorat tanteraka, ao anatin'izany ny isan-taona, fe-potoana, disertasy natomboka tao amin'ny mpampianatra ary manara-maso ny profesora. Ny teny hoe thesis dia manondro ny endrika lava momba ny mari-pahaizana doctorat izay dimy ka hatramin'ny fito taona. Term dia manondro ny programa roa taona ihany koa. Ny dissertation any Angletera dia azo omena ny naoty A na ny naoty B. Ny oniversite sasany dia manome rafitra marika mifototra amin'ny faritra samihafa amin'ny asa soratra. Ohatra, ny disertation momba ny botany dia mety homena valiny A + noho ny famolavolana sy ny fandalinana azy raha toa kosa ny thesis momba ny firafitry ny zavamaniry dia mahazo A.D (voninahitra) na A.M. (Mpampianatra).
Mba hanomanana ny dissertations-ny, ny mpianatra dia takiana amin'ny fanaovana famerenana literatiora ny lohahevitra voafantina. Ity famerenana haisoratra ity, na 'famerenana' araka ny ahafantarana azy, dia ampahany amin'ny antsoina hoe 'term dissertation.' Ny fandinihana dia manampy ny mpianatra hamantatra ireo loharano izay tokony hampidirina ao amin'ny fikarohana sy ny fanoratana ny thesis. Rehefa nahavita ity dingana lehibe ity ny mpianatra dia vonona izy hanomboka hanoratra ireo ampahany lehibe amin'ny thesis.